ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်များ (၁၀) စီး အပိုင်း (၂) — Steemit
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်များ (၁၀) စီး အပိုင်း (၂)
htetlinnaung (51) in helicopters •4months ago
7.Kamov Ka-52 Hokum -B
နံပါတ် 7နေရာမှာ ရယူထားတာကတော့ Kamov
Ka-52 Hokum -Bပဲဖြစ်ပြီးတော့ ရုရှားလေတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...အလျင်မြန်ဆုံး နဲ့ အန္တရာယ်အရှိဆုံး ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီး ဖြစ်ပါတယ်...တစ်ယောက်မောင်း အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး coaxing systemကိုအသုံးပြုထားကာ 1995ခုနှစ်မှာ ပွဲထုတ် မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်...အနီအောက်ရောင်ခြည်ရှာဖွေရေး စနစ် နှင့် Merkury Low-Light TV systemကိုအသုံးပြုထားပါတယ်...စွမ်းဆောင်ရေ မြင့်မားတဲ့ ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးဖြစ်ပြီး နေ့ရောညပါ တာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်...ရာသီဥတုဆိုးရွားနေရင်တောင် ကောင်းမွန်စွာပျံသန်းနိုင်တဲ့ ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးပဲဖစ်ပါတယ်...
ရဟတ်ယာဉ်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်တွေအနေနဲ့ 30 mm စက်အမြောက် နှင့် FCS (Fire Control System) တပ်ဆင်ထားပါတယ်...ဒါ့အပြင် Laser Guided Anti-tank Missilesများ ..S-8,S-13 rocketများထည့်သွင်းပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ rocket podsများလည်း တပ်ဆင်ထားပါတယ်...ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးကို များစွာသော လုံခြုံရေး စနစ်များနဲ့ နည်းပညာများပေါင်းစပ်ကာ ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်...ထိုရဟတ်ယာဉ်ကို အီဂျစ် လေတပ်နဲ့ ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်...
6.Agusta A 129 Mangusta
1990ခုနှစ်မှာ Agusta A129 Mangusta ကို
အီတလီတပ်မတော်က စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်...အပေါ့စားတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးအနေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်...နည်းပည်ပိုင်း နဲ့ လက်နက်ပိုင်းများကို အမြန်ဆုံး နဲ့ အကောင်းဆုံး တပ်ဆင်ထားတဲ့ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးဖြစ်ပါတယ်...Ground Attack,Anti Armor,Anti-Aircraft roleတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး နေ့ည မည်သည့်အခြေအနေမှာမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...Hellfire, Stringer,Mistral Anti-Aircraft and Anti tank missileများ တပ်ဆင်ထားပါတယ်...ဒါ့အပြင် unguided rockets များလည်းသယ်ဆောင်ပစ်ခက်နိုင်ပြီး 20mm cannonတစ်ခုလည်း တပ်ဆင်ထားပါတယ်...အီတလီလေတပ်အပြင် တူရကီ လေတပ်မှာပါ အသုံးပြုနေပါတယ်....
Follow & upvote @htetlinnaung
helicopters military msu knowledge writing
4 months ago by htetlinnaung (51)
khinzawlatt (51) ·4months ago
You receive vote 100% Vote From @khinzawlatt. Because Your Tag msu. MSU is Myanmar Steemit User Group.